WARBIXIN: Barca Iyo Real Miyay Isku Aadi Karaan Wareega 8 CL & Sida Ay Kooxuhu Isugu Beegmi Karaan %
Barcelona oo awood uyeelatay inay kusoo dar-darto dhigeeda Chelsea 3-0 habeenkii Arbacadda ayaa waxay kula biireysaa Madrid, Sevilla, Bayern Munich, Manchester City, Liverpool, Roma iyo Juventus sideed dhamaadka Champions League.
Isku aadka wareegaan ayaa waxaa la go’aamiyay in lagu sameeyo maalinta Jimcaha ah ee Isbuucaan Magaalada Nyon, gaara ahaan marka ay saacada isku soo buuxiso 12:00 Duhurnimo Laacib.so ayaana ka heli doontaa hadii uu ALLE raali ka noqdo.
Kooxihii horey isugu soo arkay Darajada Group-yadda halkaan isku arki doonan, sidoo kale kooxaha isku halka wadan kasoo wada jeeda iskuma arki doonan, laakiin waxaa macquul tahay inuu soo baxo kulan El Clasico, kaasoo dadku ay aad usugayaan.
Labadaan naadi ee kala ah: Barcelona iyo Real Madrid, ayaa hadii ay dhacdo inay isku aadaan waxay noqoneysaa markoodii afaraad maadaama horey ay iskugu soo arkeen labadaan kooxood ee xifaaltama Saddex jeer.
Markii ugu dambeysay oo ay ku kulmaan koobkaan wuxuu ahaan sanad ciyaareedkii 2011, markaasoo ay kooxda reer Catalan badisay, islamarkaana ay Final-ka kaga qaaday guud ahaan koobka Dhaga-weyne dhigeeda Man United.
Isku soo aadan Barcelona iyo Real Madrid, ayaa waxaa suuragal ka dhigeysa inay joogaan wareega 8-da saddex oo reer Spain, halka min labo kale ay ka socdaan dalalka kale.
Sikastaba, marka la sameeyo isku aadak wareega Sideed dhamaadka Champions League, ayaa waxaa lugta hore la ciyaari doonaa 3-da iyo 4-ta bisha April, halka lugta labaad loo mudeeyay in la dheelo 10-ka iyo 11-ka isla bishaas April.